Malunga nathi -Dongguan Dongwangda Precision Technology Co, Ltd.
DongguanI-Dongwangda Precision Technology Co, Ltd.yishishini elinobuchwephesha obuneminyaka emininzi yamava oshishino kwaye ligxile kwimveliso yee-odolo ezininzi ze-R & D ezihlanganisiweyo, uyilo, ukusebenza ngokuchanekileyo kwe-CN, kunye nokusebenza ngokuchanekileyo kwesinyithi. Iingcali zenkampani ziye zaqokelela amava ayiliweyo oYilo kunye nemveliso kunye netekhnoloji yokuvelisa ebalaseleyo; Sibonelela ngeenkonzo zobungcali kunye nenkxaso yezobuchwephesha kubathengi kumashishini amaninzi, egxile kwizincedisi zeemoto, izixhobo zedijithali, izixhobo zekhompyuter, iimveliso zokhuselo emkhosini, izixhobo zonyango, izinto zasekhitshini, iithoyi, izixhobo zehardware Inkangeleko yokwenza imodeli, uyilo kunye nokulungiswa kwemidlalo, njl. imveliso enkulu.
I-Dongguan Dongwangda Precision Technology Co, Ltd. ibekwe kwisixeko esidumileyo e-China. Ezona mveliso ziphambili yile: zinc ingxubevange imodeli yesandla, imodeli yesandla, ukuqhubekeka kwemodeli yesandla, ukuveliswa kwesinyithi sealuminium, ukuchaneka kunye nesinyibilikisi sealuminium entsonkothileyo, ukwenziwa kwemveliso yebatch, iindawo ezichanekileyo zokulungisa izityalo, ukwenza izityalo ezilula, njl. mayixhotyiswe phambili-ngobukhulu amaziko ngqo machining CNC, lathes, oomatshini bokugaya, grinders, oomatshini yintlantsi, ngundo lwepolitiki kunye nezinye izixhobo peripheral, kunye nomgangatho ethembekileyo, isakhiwo efanelekileyo, kunye neemodeli prototype ngokukhawuleza. Inika iimeko ezithandekayo kubathengi ukuba bazise ezabo iimveliso kwaye babambe amathuba oshishino. Iqela lethu lolawulo lisencinci, linamandla, kwaye liyanguvulindlela. Sineqela labasebenzi abanamava, abanesazela nabasebenza ngenyameko, kwaye indawo esihlala kuyo icocekile kwaye icocekile. Zonke ezi zinto zibonelela ngesiqinisekiso esifanelekileyo sokwenza iimodeli ezinobunkunkqele.
Inkampani okwangoku inenkqubo efanelekileyo yolawulo lweshishini, yomeleza rhoqo ulawulo lwangaphakathi, iphucula umgangatho wobugcisa kunye namandla okuphatha abasebenzi, kwaye "iphumelele ukuthembela kwabathengi ngomgangatho, iphumelele ukuzithemba kwabathengi ngetekhnoloji, iphumelele ukoneliseka kwabathengi ngenkonzo, kwaye iphumelele abathengi nge ukunyaniseka "" Inkolelo "yinjongo yabo bonke abantu endisebenza nabo; "Ukusebenza okuphezulu, ubunjani obugqwesileyo, ixesha lokuhanjiswa kweenkonzo, ukwaneliseka kwabaxumi" sisikhokelo esiphuma kubo bonke abo ndisebenza nabo. Ndiyakholelwa ukuba sisiseko esomeleleyo kuphela esinokwenza inkqubela phambili ye-leapfrog. Inkampani ibisoloko ibambelela kumoya "wobumbano, ubuvulindlela, ukusebenza nzima kunye nokuqhubela phambili" kunye "noxinzelelo, ukuxhamla, ukubonga" ifilosofi yeshishini. Ngokusekwe kwimigaqo yokuqinisekiswa komgangatho, ixabiso elifanelekileyo, ukuhanjiswa okukhawulezileyo kunye nokujolisa kwinkonzo, kuthatha indalo yase China njengoxanduva lwayo kwaye yenze ukonga umbane entsha Iinjongo zala maxesha "kukukhusela okusingqongileyo ukhenketho lwezoqoqosho, ukusuka kwimveliso entsha ukuya kwimizi-mveliso emitsha ". Igama lenkampani lifunyenwe kakuhle ngabathengi.
Imodeli ye-Shouban-hardware, iplastiki, i-elektroniki kunye nolunye uyilo lwemveliso kunye nophando kunye nophuhliso, ukwenziwa kwemodeli yeShouban, uyilo lwesikhunta kunye nokuvelisa, imveliso yemveliso emininzi, iinxalenye zokulungiswa, izixhobo zophuhliso. I-Dongguan Dongwangda Precision Technology Co, Ltd. isebenzisa ngokupheleleyo isoftware ye-CAD / CAM / CAE ehamba phambili emhlabeni: I-PRO / E, UG, SOLIDWORKS, MASTERCAM, AUTOCAD, kwaye yamkela kuyilo, ubunjineli obuchasayo, uyilo lolwakhiwo, imveliso yemodeli, ukungunda Ukuveliswa kwebhetshi Ukuveliswa kwenkonzo enye kumisa kakhulu umjikelo wophuhliso lwemveliso, konga iindleko zophuhliso, kwaye kuphucula ukhuphiswano lweemveliso.
1. Ukuveliswa kwesampulu ye-Hardware: (Izinto: i-aluminium alloy, i-zinc alloy, ubhedu obomvu, ubhedu, i-magnesium alloy, i-tantalum, i-nickel alloy stamping, ukugoba, njl.
2.Ukuchaneka ngokuchanekileyo kwemveliso yebhodi ye-CNC (izixhobo ze-ABS, iPC, iPP, iPOM, i-PMMA, i-PA, iPPS, i-PE, iBakelite, njl.
3. Ukudibanisa inkunkuma (ibhetshi encinci) (Izinto: ABS, PC, PP, PMMA, PVC, irabha, izixhobo ezinobushushu obuphezulu, njl.
4. Imodeli ye-Laser ekhawulezayo yokwenza umzekelo, i-SLA, i-SLS;
5.Umbumba olula: osetyenziselwa ukuveliswa kobunzima, umjikelo wokuvula omfutshane omfutshane, umgangatho wexabiso lemveliso kunye nokusebenza kwempahla ngokuhambelana nokubumba okusemthethweni;
6.Ukunyanga umphezulu njengokutshiza i-oyile, ukubhaka i-lacquering, ukususa uthuli, ukuprinta kwesilika, i-electroplating, i-oxidation, i-laser eqingqiweyo, umzobo wocingo, njl.
1. Uyilo lwemveliso mveliso, uyilo lobume be3D;
2. Izithuthi, izithuthuthu, iimoto zokudlala, nezinye iindlela zothutho kunye neendawo ezahlukeneyo ezinkulu nezincinci;
3. Iimveliso zonxibelelwano ezinje ngeefowuni, oomatshini befeksi, iifowuni eziphathwayo, ii-walkie-talkies, kunye neentsimbi ze-intercom;
4. Iitv, iisuphavayiza, izixhobo zokungenisa umoya, izinto zokucoca, izinto zokunyibilikisa, nezinye izixhobo zasendlini;
5. Oonopopi bezinto zokudlala, amanani okulinganisa, izinto ezizodwa ezilungiselelwe izixhobo zombane, izinto ezenziwayo;
6. Ukuveliswa kweemodeli ezahlukeneyo zetsimbi yealuminium, uhlobo oluninzi lwealuminiyam kunye neemveliso zeplastikhi;
7. Amacandelo oomatshini ahlukeneyo, ii-B-oomatshini, izixhobo ze-elektroniki, kunye nezixhobo zonyango;
8. Ibhokisi yamazinyo yesenzo soomatshini, i-SLA prototyping ekhawulezayo;
9. Vala imveliso yokubumba emininzi, inaliti yeoyile, ukushicilela isikrini, ukuzoba ucingo, njl
5 Axis Cnc Lathe, Cnc Machining Centre Ukwenziwa, Inkqubo yeBhodi yeCnc, Cnc Stainless Ukwenziwa, Oomatshini beShell, Cnc Precision Izahlulo Ukwenziwa,